Isifo senkumbi: izici, ukuzala nokulimala | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Emhlabeni kunezinhlobo eziningi zezinambuzane ezikwazi ukuziphindaphinda ngejubane elikhulu. Eziningi zazo zinamandla okuba izinambuzane ezingadala umonakalo omkhulu emvelweni futhi zidale izinkinga kubantu. Enye yazo yi- isifo senkumbi. Ngenye yezingozi ezilimaza kakhulu nezesabisayo kwezolimo emhlabeni. Futhi ukuthi bangakwazi ukumboza amakhilomitha ayikhulu ngosuku bese besula zonke izitshalo abadlula kuzo.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi mayelana nenhlupho yesikhonyane kanye nokulawulwa kwazo okungenzeka kube khona.
2 Ukuziphatha kanye ne-biology yokutheleka kwesikhonyane
3 Ukuhlasela kwesikhonyane
4 Izinambuzane eSpain
Ukutheleka kwesikhonyane sekuyingozi yokuphepha kokudla emazweni amaningi aseningizimu. Kuwo wonke umlando, inhlupho yesikhonyane idale indlala enkulu futhi ukuqothulwa kwayo ngokuphelele kusesekude nokuba yinto yangempela. Ngoba ijubane abahamba ngalo nenani labantu abakhona, ingasaphathwa eyokukhiqiza kabusha, benze ukuphathwa kwabo nokulawula kube nzima.
Kuthinte kakhulu umsebenzi wezolimo weminyaka eyizinkulungwane futhi kungalawulwa ngempumelelo kuphela ngokusebenzisa izindlela ezithile zepolitiki nezesayensi kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX. Kungalesi sikhathi lapho aqala khona ukunciphisa umonakalo odalwe yilesi silokazana sezinambuzane. Isibe ngesinye sezinambuzane ezilimaza kakhulu imisebenzi yezolimo. Bangathutha amabanga amade futhi babhubhise izindawo ezikhulayo befuna ukudla.. Bahamba ngejubane elikhulu ngezinkulungwane zamakhilomitha abahambe ngokunethezeka okukhulu.
Isimo samanje sezinhlupho zesikhonyane ezifundeni ezahlukahlukene zeplanethi sifundwa ngabaphenyi bamanyuvesi ahlukahlukene. Kubalulekile ukwazi indlela abaziphatha ngayo ngokuhamba kwesikhathi ukuze bakwazi ukubikezela ukufuduka kwabo. Kunezinhlobo eziningi zesikhonyane, kepha okucekela phansi kakhulu yi ISchistocerca gregaria. Lolu hlobo kuthinta amazwe angaphezu kwama-50, ezinye zazo zisathuthukiswa. Amanye amazwe ahlaselwe ukuhlaselwa yisikhonyane yilawo angenakho ukuthola izinsiza ezanele zokubhekana nomonakalo odalekile.
Ukuziphatha kanye ne-biology yokutheleka kwesikhonyane
Ama-lobster izinambuzane ezingaphansi kwe-Orthoptera oda emndenini we-Acrididae. Lo mndeni ufakiwe izinhlobo ezingaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu ezaziwayo zazo ezingamakhulu ambalwa zazo yilezo ezidala umonakalo futhi ezingaba amashumi amabili kuphela zazo ezidala umonakalo omkhulu. Iningi lazo zonke lezi zinhlobo ziyizifuduko futhi zingahambisa amabanga amade zidala izinambuzane.
Inhlupho yesikhonyane imane nje iwukubonakaliswa okukhulu kwezinambuzane ezithile ezenzeka lapho indawo ezihlala kuyo ishintsha kusuka esigabeni sodwa kuya esigabeni sobudlelwano. Isigaba sodwa sama-lobster sihambelana nendawo ezizalela kuyo. Imvamisa kuba ngezikhathi zemvula nalapho ukudla kunganikezwa khona. Ubhadane lwesikhonyane lwadalulwa lapho kuqala inkathi yokoma futhi ukudla kuyindlala. Kungaleso sikhathi lapho izinambuzane ziba nengcindezi bese ziqala ukuguqula ngokomzimba, ziguqule usayizi wazo, umbala nokuma kwazo bese ziqala ukuthuthela kwezinye izingosi zifuna ukudla.
Kungaleso sikhathi lapho ziba yizilwane ezisebenzayo futhi ziqala ukudala umonakalo kuyo yonke indawo. Ubulula bokuhamba kwabo kwenza kube nzima ukulawula ukuhlasela kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo zezolimo. Akuzona zonke izinambuzane ezidalwe zilingana, kepha uma zitshala amaqanda ekwindla, zilala zingalele phakathi nobusika bese zichamisela entwasahlobo. Ngemuva kwesikhathi esiphakathi kwezinsuku ezingama-40-90, ukukhulelwa nokubekwa kwamaqanda kwenzeka. Kungaleso sikhathi lapho abantu abadala beluma khona futhi umjikelezo webhayoloji uqala futhi.
Ukuzalelwa kweqanda ngalinye kuphenduka ama-lobster ayi-100. Kubaliwe ukuthi kwezinye izikhathi bangafinyelela kumakhophi ayizigidi ezingama-30.000.
Sikhulume ukuthi kuyisifo esikwazi ukumboza amakhilomitha-skwele angaba yizigidi ezingama-30. I- ISchistocerca gregaria Yisinambuzane esiyingozi kunazo zonke emhlabeni futhi sethula izizukulwane eziningana ngonyaka. Izinkumbi zingangena ezindaweni lapho ikhava amakhilomitha-skwele ayizigidi ezingama-30. Njengamanje, zithinta kakhulu i-Afrika nayo yonke iSoutheast Asia. Bangandiza naseziQhingini zaseCanary lapho behlale khona izinsuku ezimbalwa baze banyamalale.
Izinkuni lolu hlobo lwe-lobster okufanele zihambise kuzo ukuthola indawo efanele yokuhlala. Uma bengayitholi, bacekela phansi konke abakutholayo bathuthele kwenye indawo. Khumbula ukuthi ama-lobster akhona kuwo wonke amazwekazi futhi izinambuzane ziqubuka cishe njalo eminyakeni engama-3-4. Kodwa-ke, uma unesifundo nemininingwane ebhalwe kahle, kuyaziwa ukuthi bekungekho sibulala zinambuzane kuze kube manje indlela yokubhujiswa kwayo ngokuphelele.
Into ebaluleke kakhulu ukwazi ukuthi ukuhlaselwa yisikhonyane kwenzeka nini. Uma izindawo lapho lezi zilwane ziqala ukusabalala ziqala ukulawulwa khona, lesi sifo singaxolisa futhi silawulwe. Isibonelo, eSpain izinhlobo ezimbili zaziwa ngokuhlasela amasimu ezitshalo futhi zihlala zivela ngezikhathi ezilandelanayo. Kungalesi sikhathi lapho izinambuzane ezigunyaziwe ze-phytosanitary ziqala ukusetshenziselwa ukulawula kwazo.
Kufanele futhi kushiwo ukuthi izinhlupho zesikhonyane ezweni lethu akuyona inkinga enkulu kakhulu. Ngaphandle kwalokhu, izinsizakalo zezolimo eSpain ziphethe ukulawula izinambuzane kahle futhi zazi ukuthi lezi zinambuzane zizoguquka kuphi lapho zisuka esigabeni sodwa zaya esigabeni sobudlelwano. Yilapho kulula khona ukubabulala emthonjeni wabo.
Abaphenyi abaningana baqinisekisa ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kungashintsha imikhuba yempilo nokudluliswa kwabo ezindaweni lapho ngaphambili zingazange zibangele izehlakalo ezimbi. Ngisho, lokhu kusengaba kubi kakhulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesifo senkumbi nezici zaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Inhlupho yesikhonyane Ingabe ingalawulwa?